Frantsa – “CampusArt”: misokatra ny fianarana “design”… | NewsMada
Frantsa – “CampusArt”: misokatra ny fianarana “design”…
Anisan’ny mbola olana ho an’ny tanora eto amintsika ny tsy fisiana na ny tsy fahampian’ny sekoly manokana, mampianatra na manofana ho matihanina amina asa iray mifanaraka amin’ny fivoaran’ny teknolojia sy ny filàna, eto an-toerana sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Anisan’ny ahitana taratra izany ny eo amin’ny tontolon’ny zavakanto. Manoloana izany indrindra, misy ny “CampusArt”, tambajotran’ireo sekoly manofana momba ny zavakanto, ny lamaody, ny mozika, ny “design”, ny mari-trano, sns, any Frantsa. Amorainy ny fahafahan’ny tanora avy amin’ny firenen-kafa misitraka izany fampianarana izany. Marihina fa tohanan’ny ministera frantsay misahana ny fampianarana, ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ary ny ministera misahana ny raharaham-bahiny ity tambajotra ity.
Anisan’ny mahazo izany fiofanana izany ny Malagasy. Misokatra efa tamin’ny 5 novambra teo hatramin’ny 15 febroary 2019 ny fisoratana anarana amin’ireo fiofanana. Ao anatin’ny tranonkala na “site” an’ny CampusArt no ahafahana manao izany. Any amin’ny volana mey 2019 kosa no manomboka ny fiofanana, arakaraka ny sekoly nosafidian’ilay maniry ny hianatra.